“Yaa Marqaa Si Afuufuun Si Liqimsuufi!” | Kichuu
Posted on March 6, 2021 by kichuu_admin
Waaqoo Nooleetiin Bito. 6, 2021
#Caasaa Hawaasaa Biyya Tokkoo Keessatti, Biyya Ijaaruu fi Diiguu Keessatti Qooda Ol Aanaa Kanneen Qaban Warra Nagaya Buusuun Beekaman (peace Makers) dha.
Biyya Keenya Oromiyaa keessatti qaamota nagaha buusan(peace Makers) jedhamuun kanneen Beekaman
#Beektotaa fi Hayyoota.
Qaamoleen nagaha buusan kunneen Cufti isaaniituu Dirqama mata mataa isaanii Jireenya oolii bultii isaanii keessatti raawwatan qabu. Dabalataan akka Lammii biyya tokkootti, biyya ijaaruu( state building) keessatti:- Siyaasaan( politically), Hawaasummaan (Socially) fi Diinagdeen(Economically) hirmaannaa isaan irraa eeggamu gochuun gahee isaanii taphachuuf mirga qofa osoo hin taane dirqama Lammummaa/ Biyyummaa qabu. Haa ta’u malee dirqama isaan irraa eeggamu seeraa bahachuu dadhabuun daangaa malee haqa ummataa fi Haqa biyyaatti yoo bu’aan gaafatamummaa seeraa fi seenaa jalaa hin bahan.
Eegaa, Qaamoleen nagaha buusan kunneen gaafa dirqama isaan irraa eeggamu bahachuu dadhabanii fi Daangaa darbaa itti dhimma bahan gara biyya diiguutti deemu. Akkasumas Dirqama isaanii qixaan qixatti utti dhimma bahan taanaan gajeen isaan biyya ijaaruu keessatti qaban akkan ol aanaa dha.
Mee Dirqamaa fi gaafatamummaa qaamota armaan olii haa ilaalu!
1. #Hayyoota Amantii:- Hayyoonni Amantii biyya isaanii keessatti amantii gosa kamiituu qabaniin, beekkumsa fi barnoota Amantii sanaa babal’isuun ummata amantii isaanii sana hordofan barsiisuu dha. Caasaa biyyaa keessatti bakka bu’aa Amantaa isaa ni qabaata, mirgi Amantaa isaa akka hin dhiibamnee fi dirqama biyya isaatiif hojachuu qabu hawaasa Amantaa sana hordofaniin dhaqqabsiisuun qooda keessaa fudhata. Bakka rakkoon jirutti hayyummaa Amantii qabu saniin nagaha buusuuf qooda isaa Adda durummaan bahata.
2. #Abbootii Gadaa:-:Abbootiin Gadaa qaama Sirna Gadaa keessatti waan Gadaan jedhu Lallabuun, sirna bulchiinsa Gadaa hanga gadaa Bulchiinsa isaa fixatee kan biraatti dabatsuutti Safuu fi duudhaa sirnichaa kabajee nagaha ummataa fi Biyyaa lallavu Abukaatoo Gadaati.
3. #Haadha Siiqqee:- Wayyuu uummaa, Hanfalaa kabajaa, Ganyaa Araaraa Taankii fi Madfiin afoo hin dhaabanne Utubaa nageenyaa biyya tokkooti!
4. #Jaarrolii Biyyaa:- Jaarsi biyyaa jaarsa dhaweessaa fi maleessa jaarsa Halangee dhibdee fi kuttee kutee Koottu dhufeen taa’ee citaa fi Ciccitaa biyyaa suphu, Qaalluu Araaraa mana Kitaabaa ( Library) Biyya Tokkooti.
5. #Beektotaa fi Hayyoota:-Sammuu baranee, beekkumsaa fi hayyummaa barnoota Qalamaa qabuun Lammii isaa tajaajiluuf waadaa seene Dawaa dhibee biyya tokkooti.
Kun kanaan osoo jiruu, Qaamolleen nageenyaa biyya tokkoo mirgaa fi dirqama isaanii osoo beekanii maal na dhibee fi akka fedheen Dantaa ummataa fi biyya isaaniif yaaduu dhiisanii dantaa dhuunfaatti Imaanaa harkarraa qaban geeddaran yoo ta’e isaan Rabbii fi nama birattillee Cubbamtoota tuuta Azaabaa akkasuma Yakkamtoota seeraa Seeraa fi Seenaa jalaallee hin baanee dha.
Ustaazonni keenya dirqama iddilee keessan osoo hin raawwatin iddoo nageenyi Waaraa fi Tasgabbiin sabatiinsa qabu hin jirretti, Murna Shiftaa Harki dhiigaan laaqame faanaa hiriiruun Filannoo dimokiraatawaa fi Haqa qabeessa fakkeesitanii dorgommiif of qooheessuun Shiftoota kaleessa korkoddee isin hidhaa turtee fi har’as Ummata keessan isin afotti ajjeessaa jiraniin addummaa hin qabdan.
Sababa isin, filalloo keessatti ni hirmaannaan of kaadhimtaniif jecha, #MurniShiftaaPP lafa isin hanqisee Gootota dorgommiif dhihaateen isin jajaa jiru; Jajamuu qofa osoo hin taane jaji’amuunis akka jiru dagachuun gonkumaa hin barbaachisu. Kanaafi kan, “Yaa Marqaa Si Afuufuun Si Liqumsuufi!”jedheefi.
Filannoon Jalqabaa MCBO ti!